umbono Iiarhente zentengiso ishicilelwe kwiinyanga 2 ezidlulileyo
"Ikontraki epheleleyo yamachibi asebenza eSan Antonio iminyaka engaphezulu kwe-30 igxile kwiifolokhwe zesiko kunye ne-spas. Ielayisensi, i-Insured, kunye neBond Eyona nkampani ithembekileyo yeyona San Poz Pools ..
Khetha udidiindawo yokuhlala Amagumbi aqeshwayoBusiness Directory Iinkampani zokwakhaIsiqondisi seArhente yeZindlu Iiarhente zentengiso
IBelize ((mamela)) lilizwe elizimeleyo nelizimeleyo elunxwemeni osempuma kwi-Central America. IBelize ijikeleze umantla ntshona weMexico, empuma luLwandle lweCaribbean, kwaye emazantsi nasentshona yiGuatemala. Inommandla weekhilomitha ezi-22,970 zeekhilomitha (8,867 sq mi) kunye nabemi be-387,879 (2017). Indawo yayo enkulu imalunga ne-180 mi (i-290 km) ubude kunye ne-68 mi (i-110 km) ububanzi. Inabemi abaphantsi kakhulu kunye nobuninzi babahlali kuMbindi Merika. Inqanaba lokukhula kwenani labemi belizwe i-1.87% ngonyaka (i-2015) leliphakamileyo lesibini kule ngingqi kwaye lelona liphezulu kwi-Western Hemisphere.Impucuko yamaMaya isasazeka kwindawo yeBelize phakathi kwe1500 BC kunye ne300 AD kwaye ichuma de malunga ne-1200 . Iphulo lokuhlola ilizwe laseYurophu laqala e1502 xa uChristopher Columbus wakhwela inqanawa kwiGulf of Honduras. Ukuhlala kwabantu baseYurophu kwaqalwa ngabahlali baseNgilani kwi1638. Eli xesha liphawulwe liSpain neBritane bobabini babanga umhlaba de iBritani yoyisa iSpanish kumlo weSt George's Caye (1798). Yaba ikoloni yaseBritane kwi1840, eyayibizwa ngokuba yiBritish Honduras, kunye ne-Crown colon kwi-1862. Ukuzimela kufezekisiwe ukusuka e-United Kingdom kwi-21 kaSeptemba 1981. I-Belize inoluntu olwahlukileyo nolwenziwe ngamasiko amaninzi kunye neelwimi ezibonakalisa imbali yawo etyebileyo. IsiNgesi lulwimi lwaseburhulumenteni lwaseBelize, ngelixa ulwimi lwaseBelizean lolona lwimi luthethwayo, kuba lulwimi lwendabuko lwabantu abangaphezu kwesithathu. Ngaphezulu kwesiqingatha sabantu abathetha iilwimi ezininzi, iSpanish ibe lulwimi lwesibini oluthethwayo. Iyaziwa ngemibhiyozo yayo yangoSeptemba, imiqobo yayo ebanzi yomqobo eengca zamakhorali kunye nomculo we-punta. Ubuninzi bezinto eziphila emhlabeni kunye zaselwandle kunye nokuhlukahlukana kwazo kwendalo kuyinika indawo ephambili kwindawo ebaluleke kakhulu yomhlaba iMesoamerican Biological Corridor. Igqalwa njengesizwe esikuMbindi Merika kunye neCaribbean esinomanyano oluluqilima kwimimandla yaseMelika nakwiCaribbean. Ililungu loLuntu lweCaribbean (CARICOM), uLuntu lweLatin American kunye neCaribbean (CELAC), kunye neCentral American Integration System (SICA), ekuphela kwelizwe lokugcina ubulungu ngokupheleleyo kuyo yonke imibutho emithathu yommandla. IBelize yindawo yesiqhelo yobukumkani, kunye neKumkanikazi uElizabeth II njengokumkani wayo kunye nentloko yamazwe.
zonke iindidiindawo yokuhlalaBusiness DirectoryIsiqondisi seArhente yeZindlu